संसारमै नभएको गैँडा यता देखियो- सुँड भएको ! – MySansar
संसारमै नभएको गैँडा यता देखियो- सुँड भएको !
Posted on January 31, 2020 by Salokya
गैँडाको बारेमा त हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमा प्रशस्त बोलिसक्नुभएको छ। गैँडा नदेख्नेको आधा जुनी खेर जान्छ भन्ने महावाणी उहाँकै हो। गैँडा पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन्- एक सिङ्गे गैँडा चाहिँ हाम्रो देशमा पाइने हो।
तर तपाईँलाई थाहा छ? सुँड भएको गैँडा पनि हुने रहेछ नि। नपत्याउनु भएको ? तलको समाचारको स्क्रिनसट हेर्नुस् त।
पूरा समाचारको लागि यता क्लिक गर्नुस्।
देख्नुभो त अचम्मको गैँडा? बडेमानको जिउ, सूँडसमेत गएको कस्तो हात्ती जस्तो देखिने गैँडा हगि। यो कहाँको गैँडा रहेछ भनेर यसो खोजी हेर्दा थाहा भो, यो त क्याम्बोडियाको मरेको हात्तीको फोटो पो रहेछ।
यसो गुगलमा सर्च गरेर फोटो हाल्दासम्म त सहन सकिन्छ। अधिकांश अनलाइनले यसरी नै समाचारसँग असम्बन्धित फोटो राखेको देखिरहेकै हुन्छौँ हामीले। तर गैँडा र हात्ती नै नचिन्नु त अति भएन र? प्रधानमन्त्री ज्युले भने जस्तो गैँडै नचिन्नेको आधा जिन्दगी खेर गएन त?
7 thoughts on “संसारमै नभएको गैँडा यता देखियो- सुँड भएको !”
हातिलाई गैंडा भन्ने पत्रकारले यदी यो कुरामा समयमै गल्ति भयको नस्विकारेको भय त्यो पत्रकार पत्याउनै नसक्ने आकारको हुनु पर्छ;खाने मुख र् आच्छि गर्ने नै उल्तो पुल्तो भयको। तेसो होईन भने कसैको मुखाकार बा गोजिकार हुनु पर्छ।
पत्रकारिता अद्रिश्य् सत्यलाई पनि आकार दिने हुन्छ; गलत आकार दिने हुँदैन। तर यस्तो भयकोमा बा यस्तो पनि भयकोमा चकित हुने अवस्थानै छैन;आरोपित् सम्मानित र् घोक्राउनु पर्ने घोल्राउने हुने,…मा मागि नपायकोमा मानव….हुने गढिमाई मेला गर्ने तर दिल्लिको प्रशाद पाय पछि प्रफुल्लित हुने ….मा।
अाेरिजनल फाेटाे कहाँकाे हाे कसरी थाहा पाउने हाेला । जस्ताे तपाइँले हात्तिकाे फाेटाे कहाँ काे हा भनेर पत्ता लगाउनु भएकाे छ नी त्यसरी नै कुनै फाेटाे पहिले कस्ले हाल्याे वा कहाँ काे हाे भनेर कसरी थाहा पाउने टिप्स वा एउटा केही कुरा लेख्दिनु पराे ।
हस्। याे विषयमा छुट्टै ब्लग तयार पार्नुपर्ला।
yo pani duniyako aathau achammamit ip address le farak dekhayo ki kaso ??? hahaha maile ta hatti nai dekhe
प्रखर थापा says:
के हो किस्न अधिकारी जी ? कसको लागि बोल्नु भाको ? कसको नग्न चाला छोप्ने प्रयास गर्नु भाको ? यसो हेर्नुस त पाइन्ट लगाउनु भएको छ कि छैन ? बडो नग्न निर्लज्ज पारा निकालेर सरासर झुट बोल्ने ?
सालोक्य सर, तपाईले दिनु भएको लिंकमा क्लिक गरेर हेर्दा त मरेको गैंडाकै फोटो देखिन्छ त । अहिले समय ३१ जनवरीको ११०९ बज्यो ।
हजुरले पनि गैँडा र हात्ती चिन्न छाड्नुभाे उसाेभए ? ब्लग लेखेसि सुटुक्क फाेटाे चेन्ज गर्लान् भनेरै अर्काइभमा सेभ गरेकाे अनि स्क्रिनसट लिएकाे हाे, यसरी झुक्याउने प्रयास नगरे हुन्छ ??
LeaveaReply to shiva raj Cancel reply